Shiinaha Aspirator AVERLAST 25 warshad iyo soosaarayaasha | AngelBiss
Mashiinka Mashiinka loo Qaadan Karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction' oo wata Nidaamka Dhalada Tooska ah ee Tooska ah iyo nidaamka ilaalinta laba-geesoodka ah ee ka hortagga qulqulka. Waxaa si gaar ah loogu talagalay codsiyada leh socodka joogtada ah iyo dabeecada cadaadiska, mashiinka nuugista la qaadan karo wuxuu bixiyaa hab deg deg ah oo wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo dhiigga, ama dareeraha kale ee caafimaadka ee daaweynta daaweynta ilkaha.
Mashiinka Mashiinka loo Qaadan Karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Suction' oo wata Nidaamka Dhalada Tooska ah ee Tooska ah iyo nidaamka ilaalinta laba-geesoodka ah ee ka hortagga qulqulka.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay codsiyada leh socodka joogtada ah iyo dabeecada cadaadiska, mashiinka nuugista la qaadan karo wuxuu bixiyaa hab deg deg ah oo wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo dhiigga, ama dareeraha kale ee caafimaadka ee daaweynta daaweynta ilkaha.
Awoodda ballaaran ee dhalada ayaa kaa ilaalin doonta inaad ku celceliso ficilka bamgareynta. Dhaladaasina waa mid aan biyuhu karin oo dib loo isticmaali karo. Waxay keydin doontaa kheyraadka.
Mashiinka la nuugo ee la qaadan karo wuxuu leeyahay hal gal. Way fududahay in lagu shaqeeyo. Dhalada nuugista iyo mashiinka mashiinka ayaa is waafajiyay.
Waxay kaloo leedahay hangool jilicsan. Waxay noqon doontaa mid ku habboon in la nadiifiyo markii la dhammeeyo.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay codsiyada leh socodka joogtada ah iyo dabeecada cadaadiska, mashiinka nuugista la qaadan karo wuxuu bixiyaa hab deg deg ah oo wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo dhiigga bukaanka, biyaha, malaxda iyo dareeraha kale ee dareeraha qalliinka ka dib.
Markaad haysato mashiinka nuugista la qaadan karo, waxay ku siin doontaa adeeg deg deg ah oo wax ku ool ah qolka gurmadka iyo qolka qalliinka.
Naqshadeynta Mashiinka Mashiinka la qaadan karo ee loo yaqaan 'AngelBiss Portable Mashiinka Mashiinka' oo laga soo qaado 18L iyo socodka hawada ee 25L, oo ​​leh kala-xakamaynta faakiyuumka oo kala ah 0.07Mpa ~ 0.08Mpa. Waana la heli karaa
110V ama 220V.
Fadlan samee xulasho habboon codsigaaga gaarka ah.
Wixii su'aalo dheeraad ah ama su'aal ah ee ku saabsan mashiinka nuugista la qaadan karo ee 'AngbelBiss Portable', fadlan nagala soo xiriir info@angelbisscare.com oo wakiil ayaa kula socon doona sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Hore: Mashiinka Mashiinka La Qaado ee Ilkaha
Xiga: AUTO CPAP / BIPAP
Dhiig-baxa Aspirator Laser
Mashiinka Nuugista Qalliinka Aspirator-ka